दया र प्रियंकाको धड्कन किन बढ्दैछ सुस्त ? (भिडियो) « Ramailo छ
दया र प्रियंकाको धड्कन किन बढ्दैछ सुस्त ? (भिडियो)
भोलि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘सुस्त यो‘’ बोलको रोमान्टिक गीतमा अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत छन् । गीतको भिडियो हेर्नुस् :
ताराप्रकाश लिम्बूले संगीत रहेको गीतमा नरेश भट्टराईको शब्द छ । गीतमा संगीतकार लिम्बु र दीपा लामाले स्वर दिएका छन् । मिलन चाम्स निर्देशित फिल्ममा दयाहाङ र प्रियंकासँगै संजय गुप्ता, दीया पुन, विक्की जोशी, शिशिर राणा, रुपा पुन, रिकेश चाम्स र जेन बकल अभिनय छ । ‘ह्याप्पी डेज’ मा बिपी खनाल, भवानी शर्मा, हिरल जोशी, मिलन चाम्स र डा. अशोक खनालको लगानी छ ।